I-china Dongshen design entsha yokwenza ibhulashi isethwe i-14pcs isiliva fiber synthetic wool wool ferrule handle isibambo ithuluzi lobuciko makeup artist ithuluzi lokwenza ibhulashi lezimonyo Umkhiqizi nomhlinzeki | UDongmei
I-Dongshen new design makeup brush isethwe i-14pcs isiliva fiber synthetic wool wool ferrule handle handle
Ngezicucu eziyi-14 ezahlukahlukene zemabhulashi, ngalinye elenzelwe ukubhekana ngqo nezindawo ezithile zebala, izingcezu eziyi-14 ze-master studio ibhulashi zisetha ngobuso obuhle ngenkathi ngasikhathi sinye zakha isiphetho esingenaphutha kunoma yikuphi ukubukeka. Enomusa, ebabazekayo futhi ecwengisisiwe, leli qoqo lingenza ukwengeza okumangazayo kunoma iyiphi itafula lokugqoka lomlutha wobuhle. Yilungele i-studio ngalesi setha sokuguqula amabhulashi we-makeup asethwe eDONGSHEN.
- Ochwepheshe makeup ibhulashiama-bristles athambile futhi aminyene, isibambo se-ergonomic sikuvumela ukuthi uhlangane nesisekelo, uketshezi, ukhilimu kanye ne-powder ngaphandle kokukhathala noma amajaqamba ezandla ... ngokushesha futhi kulula kunanini ngaphambili. I-Make up brushes set set professional has, face brush, eyeshadow brushes, blush brush, powder brush, concealer brush eye makeup brushes ukwenza ngezifiso i-makeover yakho ngaphandle kokwephula ibhange.
- Isiphetho esiphakeme sesibambo sebhulashi leseti. Ukucasulwa okungenasikhumba, okungachitheki.
- Sebenzisa amabhulashi wokufihla we-Flat and Angled ukumboza ngobungcweti noma iziphi iziphambeko noma ukungapheleli.
- Izinwele zokwenziwa nazo zihlanzekile futhi zihlala isikhathi eside ukuze zisebenze ngobuchwepheshe.
* Umbuzo wakho uzophendulwa ngamahora angama-24.
* Yonke imininingwane yakho eyimfihlo nemibono yomkhiqizo izovikeleka.
* Amandla okwenza imikhiqizo emisha angakusiza ukuthi wandise imakethe yakho.
* Ikhwalithi ephezulu nentengo yokuncintisana.
* Isikhathi sokulethwa esheshayo nensizakalo enhle.
* Sine professional design dept.
* I-OEM ne-ODM yamukelekile.
* Ungathenga imikhiqizo ekwenza waneliseke.
* Imikhiqizo eminingi ingakhetha.
A: Yebo, singakwazi ukuklama njengesicelo samakhasimende, igama lenkampani, inombolo yocingo, ilogo, njll. Udinga nje ukusithumela umdwebo womklamo.
Q: Singakanani isikhathi sakho lokuthumela?
A: Isikhathi sokuqala sokulethwa kwamakhasimende amasha imvamisa izinsuku ezingama-50. Ngemuva kokubambisana okuningi phakathi kwethu, kungafinyelelwa ezinsukwini ezingama-30 ~ 45.
Langaphambilini I-12pcs ibhulashi lezimonyo elibekwe ngesihluku-mahhala i-vegan yokwenziwa kwezinwele isibambo esimnyama sokhuni sangasese selebuli yobuso ebusweni
Olandelayo: Ilebuli yangasese eyenziwe ngokwezifiso i-wholesale 12pcs rose ibhulashi elibomvu elenziwe ngesethi ye-powder blush contour egqamisa ishiya eyeshadow elihlanganisa ithuluzi lebhulashi lezimonyo
isethi yebhulashi lezimonyo
I-Makeup Brush Setha i-Professional Makeup Brushes
Ithuluzi Brushes Brushes
Dongshen makeup ibhulashi vegan zokwenziwa enobungane ...
Ukushefa Setha, Ukugunda Izinwele, Yenza amabhulashi, Setha i-Makeup Brushes, Ithuluzi Brushes Brushes, isethi yokwenza ibhulashi,